Echiche 5gha XNUMX nke Social Media | Martech Zone
Monday, November 2, 2009 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Nke a nwere ike ịbụ ikwugharị post… mana m ga-ekwusi ike na nke a. M na-ele ọtụtụ ụlọ ọrụ na-asụ ngọngọ niile na-elekọta mmadụ media azum. Ha mechara hapụ ya kpamkpam. Ajuju enweghi m ike ịza ha bụ gịnị kpatara ha jiri gbalịa na mbụ?
Ọ na-amasị m iche banyere mgbasa ozi mmekọrịta dịka ampilifaya… an n'ụzọ dị ịrịba ama ike ampilifaya. Ọ bụrụ na ị nwere ntọala siri ike nke mmekọrịta ọha na eze na ịzụ ahịa, ma na-ekpuchi nnweta na njigide n'ụzọ dị irè, nnukwu ọrụ gị ga-apụta nke ọma ka ịmalite ịmalite itinye aka na iwulite aha gị n'ịntanetị. Y’oburu n’inwe mediocre PR na usoro ahia, soshal midia nwere ike ibibi ya.
My 5 Echiche ofgha nke Social Media Marketing
Mgbasa mgbasa ozi na-anọchi ebe nrụọrụ weebụ. Ka choro ebe ijide ndu ma dọrọ uche gaa na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ gị.
Mgbasa mgbasa ozi na-anọchi ahịa ahịa email. Email bụ Kwaa usoro nke na-agwa ndị ahịa na atụmanya mgbe ịchọrọ ka akpọtụrụ ha. N'ezie, Social Media chọrọ ọtụtụ ozi email ka ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na-alọghachi. Chee echiche banyere ozi ịntanetị ị nwetara site na LinkedIn, Facebook, na Twitter!
Usoro mgbasa ozi dị elu na-egosi na ọ bụ ebe dị mma ịkpọsa. Social media abụghị ihe iji tụfuo mgbasa ozi n'elu nke, ọ bụ ihe a ga-esi n'ime kọọrọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbanye ego na mgbasa ozi ọkọlọtọ na mgbasa ozi ederede na saịtị mgbasa ozi ebe ndị ọrụ enweghị ebumnuche ịzụta.
Enweghi ike ịtụ mmetụta mgbasa ozi ọha na eze. Mmetụta mgbasa ozi ọha na eze nwere ike ga-tụrụ, ọ bụ nnọọ ihe siri ike tụọ mmetụta. Ga-achọ iji ọrụ a Siri ike nchịkọta ngwugwu - ikekwe site na ijikọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ chọpụta otu esi etinye akara koodu nke ọma site na nke ugbu a nchịkọta ngwugwu iji jide ndu na ntụgharị site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Social media dị mfe, ị dị mee ya. MBA! Mgbasa mgbasa ozi adịghị mfe. Were ya na ịnọ na nnọkọ nri ehihie ma kwuo maka ngwaahịa na ọrụ gị na atụmanya. Ọ mụmụọ ọnụ ọchị, ị mụmụọ ọnụ ọchị, jụọ ajụjụ, ị kwuo azịza niile ziri ezi… ị kwụrụ ụgwọ maka nri ehihie… jidere ntụkwasị obi ya. Na ntanetị, ị hụghị mgbe ha na-abịa, ị maghị ebe ha gara, ị maghị ihe ọ bụla ọzọ karịa eziokwu ahụ bụ na ha nwere ike ịma karịa gị.
Social media na-ewulite ntụkwasị obi na onye ị nwere ike ị hụtụbeghị. O siri ike, ọ na-ewe oge… ọ bụ marathon, ọ bụghị ịgba ọsọ. Mgbasa mgbasa ozi na-ada ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ihi na ha na-elelị ihe onwunwe na oge ọ na-ewe iji wuo ike ahụ. Ha amaghi na obu otutu ego, o bughi usoro nke nkpuru-obi.
Site na atumatu, ị nwere ike gbawaa n'ọnụ ụzọ ma bulie azụmaahịa gị karịa atụmanya. Na-enweghị ya, ị nwere ike ikuku na-atụba na akwa nhicha ahụ.
Nke a bụ ihe kpatara Southwest Airlines na Zappos nwere ike ịga nke ọma na Social Media, mana United Airlines na DSW anaghị eme nke ọma. Southwest Airlines na Zappos dị mma, ụlọ ọrụ ndị ahịa na-elekwasị anya tupu mgbasa ozi mgbasa ozi malitere ruo ugbu a. Airlinesgbọ elu United nwere ike ọ gaghị enwe ike ịmekọrịta usoro mgbasa ozi mmekọrịta nyere ha iwu tozuru oke na stodgy.
Dị ka a panelist taa na Real Estate BarCamp Indianapolis, ị pụrụ ịhụ na nso nke ụlọ ọrụ na agbanwe nri n'ime ụlọ. Fọdụ, dịka ezigbo enyi na onye ahịa Paula Henry (ha abụọ) Roundpeg na DK New Media nyere ya aka), na-agbago n'ihu n'ihu na ha kagburu usoro mgbasa ozi ọdịnala niile ma na ntanetị. Nsogbu Paula abụghị esi nweta ndu… Ọ bụ otú na-ya na-elekọta mmadụ media atụmatụ na ijeụkwụ ọ bụ mgbe na-arụ ọrụ niile nke ya na-eduga.
Ndị ọzọ nọ n’ime ụlọ ahụ ka na-arụ ọrụ n’azụ usoro ahụ twitter no twitter, no facebook, no online persona, no search engine njikarịcha, enweghị ịde blọgụ, wdg. n'oge ka ha daba n'ime usoro Social Media n'echiche m dị umeala.
Ndị bịara ọhụrụ kwesịrị ịmụta otú e si aga ije tupu ha agbaa ịnyịnya. Ha choro ebe nrụọrụ weebụ bara uru nke nwere ike ịdọrọ okporo ụzọ ma nye gi ozi kọntaktị iji soro onye nwe ahia. Ha kwesiri ichoputa ma jiri okwu ndi nwere mmetuta na mpaghara ha na - eje ozi - gunyere agbata obi, koodu zip, obodo, ógbè, mpaghara ụlọ akwụkwọ, wdg. Ha kwesịrị iji akwụkwọ ozi email iji na-akpọtụrụ ndị ndu na ndị ahịa gara aga. Ha kwesịrị idokwa Ezigbo ihe ngwọta nke ala na ụlọ iji dochie ndị fliers ha na-eri nri n'ihu ihe onwunwe.
Mgbasa mgbasa ozi nwere ike inye nnukwu olu nke ndu gị maka olulu ahịa gị… mana ị ga-enwerịrị ọrịre ahịa ahụ, na-atụle mmetụta nke nsonaazụ ya, ma na-arụ ọrụ mmemme ahịa gị mgbe niile iji zụlite ma jide ndị ahịa na ndị ahịa. Mgbasa mgbasa ozi na-abịa n'ihu… na-eme ka usoro ahịa ahịa dị irè ma na-amalite ịmalite ka ikike na nghọta na-eto.
Tags: email Marketingmythselekọta mmadụ mediaSocial Media Marketingakụkọ mgbasa ozi
Nov 3, 2009 na 10:03 AM
Ndewo Doug, nnukwu post.
Ọ dị mkpa ka ndị mmadụ bulie akụkọ ifo nke "Social Media bụ Cakewalk". Naanị m bụ onye na-esote n'ọfịs n'oge mbụ, na oge ole njikwa ahụ gwara m ka m "kụziere ha ka ha jiri Twitter mee ihe n'ụzọ ziri ezi" n'ime otu awa ma ọ bụ abụọ gbagwojuru m anya. Ihe ndị a na-ewe oge, ntinye - na ọchịchọ ịmụ ihe. Ndị mmadụ na-achọ ngwa ngwa na SM, n'ihi na ha chere na ọ bụ ụzọ dị ngwa iji nweta ego. Ọ bụ n’ezie, na ịkwesịrị ịmụ site na ime.
Nov 4, 2009 na 4:04 AM
Ọfọn, Andrew! Mgbe ndị mmadụ na - ekwu "kuziere m etu esi eji ya nke ọma", mgbe ụfọdụ ha na - ekwu… "kedụ ka anyị ga - esi jiri teknụzụ a mee ihe maka ọdịmma anyị". M na-agba… mkpu! 🙂
Nov 3, 2009 na 1:27 PM
Nnukwu edemede, daalụ nke ukwuu. N’ọfịs m enwere ọtụtụ ndọkụrịta gbasara ụfọdụ akụkụ nke mgbasa ozi mmekọrịta, a ga m eziga email a gburugburu ụlọ ọrụ ahụ!
Nov 4, 2009 na 4:03 AM
Daalụ Joe! Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ igwu obere omimi, nke ahụ bụ ihe DK New Media eme! Mee ka m mara ma ọ bụrụ na anyị nwere ike inye aka.
Nov 3, 2009 na 4:53 PM
@douglaskarr Nghọta gị na-enye ume ọhụrụ, ọkachasị oge ịhapụ gị na ọ bụghị mmadụ niile dị njikere isonye na SM. N'ezie, ndị na-ahụ netwọk SM dị ka ebe ọzọ iji kpuchie ozi mgbasa ozi na-egosi enweghị nghọta dị mkpa banyere ihe netwọkụ ndị ahụ na-anọchi anya ya, na-echehie ngwa ahịa maka atụmatụ azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa.
Nov 4, 2009 na 4:02 AM
Daalụ nke ukwuu Scubagirl15! Ihe niile na-amalite site na atụmatụ… teknụzụ kwesịrị itinye ya n'ọrụ MGBE akọwapụtara ihe mgbaru ọsọ niile. Ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-enwe mmasị ịnwale ma were mgbasa ozi ọha na eze ma mee ka ọ daba na nsogbu niile ụlọ ọrụ nwere. Jiri okwu ọma gị kpọrọ ihe!
Nov 4, 2009 na 3:46 AM
Achọrọ m ịlaghachi azụ na egwuregwu azụmaahịa m. Ihe na-agbanwe nke ukwuu kwa ụbọchị. Uzo niile m jiri dikwa ya adighi aba uru ugbu a. Ma ị chọpụtala ihe ole na ole m na-echetụbeghị n’echiche, obi dịkwa m ụtọ. Aga m enwetara m isi m na gia wee rite uru na azụmaahịa mmadụ n'oge adịghị anya!
Nov 4, 2009 na 4:07 AM
Echegbula onwe gị oke banyere ịhapụ traction. Anyị ka nọ n’oge anụ ọhịa ọdịda anyanwụ nke ụbọchị ịzụ ahịa mmekọrịta anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta. Inweta ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ mbụ, ewu a atụmatụ… ma ọ bụrụ na-elekọta mmadụ media ahịa nwere ike na-ekere òkè NA nwere nti ROI nyere ego… mgbe na-aga maka ya!
Nov 4, 2009 na 1:15 PM
Dị ka mgbe niile… oké ndụmọdụ, nghọta na a oké àgwà! Daalụ Doug!